Dolwadda Turkiga oo xirtay 9 ruux oo lagu eedeyay in ay ka tirsan yihiin Ururka Daacish. - Iftiin FM
Dolwadda Turkiga oo xirtay 9 ruux oo lagu eedeyay in ay ka tirsan yihiin Ururka Daacish.
Wararaka naga soo garaya dalka Turkiga ayaa sheegayaan in Ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay xireen 9 ruux oo heysta dhalashada Ciraaq, kaddib markii lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin ururka “Dowladda Islaamka”, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Anadolu.
Soomali dilal ka geystay dalka Talyaaniga.
Wararka ayaa intaa ku daraya in “Xafiiska Xeer Ilaalinta ee Ankara ay soo saartay go’aan lagu soo qabtay 15 Ajaanib ah oo ka tirsan Daacish”, waxayna xuseen in ciidamada ammaanku ay saaka sameeyeen howlgal isku mid ah, kaasoo lagu soo qabtay 9 qof oo u dhashay dalka Ciraaq.
Trump oo laga xiray cinwaankiisa Twitter-ka .
Ilaha ammaanka ayaa daaha ka qaaday in “maxaabiista ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen gudaha dalkaasi, waxayna sii wadeen inay la xiriiraan kuwa kusugan aagagga iskahorimaadyada ka dib markii ay soo galeen Turkiga.”
Soomali badan oo dalkooda soomaliya dib ugu labteen maanta
Wakaalada Anatol ayaa sheegtay in maxaabiistan la filayo in loo gudbiyo hoggaanka socdaalka ee caasimadda, si loogu diyaar garoobo masaafurintoodi dalka Iraq.
Dusan Vlahovic oo ka hadlay Kooxda Arsenal
Raila Odinga oo cambaareeyey Siyaasinta qaarkood